Qalabka Baahinta Raadiyaha FM, Qaadaha Raadiyaha FM Tayada Sare
Qaybtan waxaa ku jira taxane FM ah oo xoog badan, qurux badan oo wax ku ool ah iyo raadiyaha FM ee taxanaha Tec sun CZE, PL series, de series, Ms series, series R, series, BCL series FM receivers, FM radios, Tu series Fu FM modulators, iyo demodulators.
Taxanaha Tec sun idaacadaha FM waa cabbir yar waxayna ku fiican yihiin nashqada waxayna mudan yihiin in la iibsado. Barta ugu soo jiidashada badan ayaa ah afhayeenka ugu fiican gudaha si aad ugu raaxaysato codka qeexitaanka sare. Soo dhaweheeyihii raadiyaha ugu dambeeyay ee Tecsun ayaa yimid. Ku qalabaysan wareegyada soo noqnoqoshada sare iyo dhexdhexaadka ah ee analooga ah, beddelashada multiplex, iyo tignoolajiyada xallinta DSP, taxanaha qoraxda ee TEC wuxuu leeyahay waxqabad aad u wanaagsan xagga dareenka, xulashada, iyo faragelinta (xakamaynta sawirka) saldhigga muraayadda. Marka laga soo tago horumarkan tignoolajiyada, Heelaha heerka sare ee ugu dambeeyay ee Tecsun waxa kale oo uu soo bandhigayaa shaqada "keydinta kala soocida tooska ah", kaas oo siinaya isticmaale-saaxiibtinimo iyo raaxaysi marka la isticmaalayo xarumaha kaydinta. Si loo sii wanaajiyo raaxaysiga maqalka, waxaa lagu qalabeeyay heerka AB Cod-weyneeye Awood maqal iyo cod baahiye buuxa oo firfircoon. Inta jeer ee soo noqnoqda FM-ta waxaa loo dejin karaa inuu helo 87 ~ 108MHz, 64 ~ 108MHz (helitaanka qayb ka mid ah baahinta jaamacadda), 76 ~ 108MHz (Heerka Jabbaan), ama 87.5 ~ 108 MHz (Heerarka Shiinaha, Yurub iyo Ameerika). Waxay leedahay dareen helid sare leh iyo isgaadhsiinta isgaadhsiinta caadiga ah ee ku xidhan telemetry. Waxaa loo isticmaali karaa soo-celiyeyaasha baahinta, la socodka baahinta FM-ta, iyo codsi kasta oo kale oo u baahan kuwa qaata FM-ta tayada sare leh.
Tignoolajiyada cusub ee habaynta calaamadaha dhijitaalka ah (DSP) iyo tignoolajiyada soo noqnoqoshada tooska ah ee dhijitaalka ah (DDS) ayaa loo adeegsadaa FM iyo demodulators ee taxanaha Tu iyo taxanaha Fu. Ku faafi tayada CD-ga DSP (processor-ka calaamadaha dhijitaalka ah) + DDS (soo noqnoqoshada isku-dhafka dhijitaalka ah ee tooska ah) waxay qabataa koodka isteeriyooyinka iyo habaynta FM. Taageer AES/EBU gelinta maqalka dhijitaalka ah ee caadiga ah.